Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Russia » Manohy ny sidina mpandeha any amin'ny firenena dimy hafa i Russia
Manohy ny sidina mankany Islandy, Malta, Mexico, Portugal ary Arabia Saodita i Russia.
Ny sidina avy any Moskoa mankany Reykjavik, Islandy ary avy any Moskoa mankany Valletta, Malta dia hiasa indroa isan-kerinandro
sidina avy any Moskoa mankany Cancun, Mexico, Lisbon, Portugal ary Jeddah, Arabia Saodita dia hiasa intelo isan-kerinandro
Ny sidina avy any Grozny, Russia ary Makhachkala, Russia mankany Jeddah, Saudi Arabia dia hiasa isan-kerinandro
Ny foibem-piasana Rosiana amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 dia nanambara fa hanohy ny serivisy amin'ny serivisy miaraka amin'i Islandy, Malta, Mexico, Portugal ary Saudi Arabia i Russia amin'ny 25 May.
Sidina avy any Moscow mankany Reykjavik, Islandy ary avy any Mosko mankany Valletta, Malta dia hiasa indroa isan-kerinandro, ary sidina avy any Moskoa mankany Cancun, Mexico, Lisbon, Portugal ary Jeddah, Saudi Arabia - intelo isan-kerinandro.
Ankoatr'izay, ny sidina avy any Grozny, Russia ary Makhachkala, Russia mankany Jeddah, Saudi Arabia dia hiasa isan-kerinandro.
Ary manomboka amin'ny 25 mey, ny sidina mpandeha mankany amin'ny firenena vahiny dia haverina amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Omsk, Syktyvkar, Chelyabinsk, Magnitogorsk ary Ulan-Ude.
Nampandrenesina ihany koa ny fitomboan'ny isan'ny sidina mahazatra avy any amin'ny Federasiona Rosiana mankany Korea atsimo, Failandy, Japon.